Topnepalnews.com | कोशीब्यारेज भत्किन थाल्यो : ढोका नेपालमा, चाबी भारतसँग ! के हो कोशीब्यारेज ?
कोशीब्यारेज भत्किन थाल्यो : ढोका नेपालमा, चाबी भारतसँग ! के हो कोशीब्यारेज ?
Posted on: August 13, 2017 | views: 2359
काठमाण्डौ । हरेक वर्षायाममा पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन र रेडियोहरुको हेडलाइन बन्छ–कोशी नदीको पीडा । पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षा भएपछि जब जब कोशी नदीमा पानीको बहाब बढ्न थाल्छ, तब खतराको घण्टी(साइरन) बज्यो, खतराको झण्डा गाडियो भन्ने आशयका समाचारहरुको ओइरो लाग्छ ।
त्रासै त्रासको बीच जब बर्षायाम सकिन्छ, फेरि सेलाउँछ कोशीको मुद्धा । स्थानीय स्तरदेखि सरकारी प्रतिनिधि र सत्ता संचालन गर्नेहरुले समेत कोशीको मुद्धा बिर्सिन्छन् ।
यस्तै–यस्तै नियमिततामा ६ दशक बढी समय बितिसकेको छ । यो अवधिमा न कोशी समस्या समाधान भयो, न त कोशीको पानीमा भारतीय एकाधिकार र दादागिरी नै ।
अचम्म त के छ भने कोशी सम्झौतापछि नै हाम्रा शासकहरुले कोशी ब्यारेजको सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतीय पक्षलाई सुम्पिने आत्मघाती काम गरे । त्यही कामको सजाय र पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्दैछ ।
शनिवार बिहानदेखि नै तराई–मधेशमा बाढीले बितण्डा मच्चाएको छ । सानातिना खोलाको समेत समयमै नियन्त्रणमा ध्यान नपुुग्दा र शहरीकरणको नाममा भद्धा र अव्यवस्थित काम हुँदा हिउँदमा चिटिक्क र सुन्दर देखिने शहरहरु समेत बाढीका कारण कुरुप बनेका छन् ।
स्थानीय नेतृत्वको अदूरदर्शी नीति र विकास भनेको घर र बाटो बनाउनु मात्र हो भन्ने मूर्ख बुुझाईका कारण इटहरीजस्तो ठाउँ डूूबानमा परेको छ । कथा सुनाउँदै आफूसँगै निद्रादेवीको काखमा लुटपुटाएका दूधे बालकहरुलाई बिहान उठ्दा बाढीले खोसेर यमराजमा पुर्याइसकेको नियति एउटी आमाका लागि कति पीडादायी होला ?
इटहरीसँगै सप्तरी, विराटनगर लगायतका क्षेत्र समेत डूूबानको चपेटामा परेका छन् । विराटनगर एयरपोर्ट समुन्द्री बन्दरगाहजस्तो भएको छ । यसरी डूूबान र बाढीपहिरोको कहरका समाचार आइरहँदा कोशी मुद्धा फेरि एकपटक चर्किएको छ ।
बर्षा अविरल छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार समेत भारी बर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा समेत वर्षा रोकिएको छैन । जसका कारण कोशीमा पानीको बहाब बढेको बढ्यै छ । आजै(शनिवार) साँझसम्म कोशी नदीमा पानीको बहाब प्रति सेकेण्ड २ लाख ८३ हजार क्यूसेक थियो ।
बहाब २ लाख ५० हजार माथि कट्ने बित्तिकै कोशी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुममा भारत सरकारबाट खटिएका कर्मचारीहरुले खतराको संकेत स्वरुप रातो बत्ती बालेर रातो झण्डा फहार्याउँछन् । बहाब ३ लाख क्यूसेक प्रतिसेकेण्ड भन्दा माथि गयो भने कोशीमा पूर्ण खतरा भएको मानिन्छ ।
पूर्ण खतराको जोखिमतर्फ कोशीको बहाब बढिरहँदा कोशी ब्यारेजका ५६ मध्ये ३७ ढोका मात्र खोलिएको छ । कारण, कोशी ब्यारेज नेपालमै भूमिमै पर्ने भए पनि त्यसको चाबी भने भारतीयहरुसँग छ ।
त्यहीकारण सधैंको वर्ष झै कोशीले बितण्डा मच्चाउने डर बढिरहँदा समेत उनीहरुले सबै ढोका खोलेनन्, वा खोल्न मानेन् । हामीले ढोका खोल्नैका लागि प्रत्येक वर्ष भारतसँगै लम्पसार परेर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
ढोका खोल्न किन मान्दैन भारत ?
कोशी ब्यारेजमा भारतीय प्राविधिक लगायतको कर्मचारीहरुको टोली सधैं कार्यरत हुन्छ । ब्यारेजमा उनीहरुले कार्यालय नै खोलेर कोशीको गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।
पानीको बहाब खतराको लेभल भन्दा माथि गइसकेपछि बढी भन्दा बढी ढोका खोल्न सकिए मात्र त्यसबाट नेपाली भूूभाग र बस्ती जोगाउन सकिन्छ ।
तर, कोशी कन्ट्रोल रुमका कर्मचारी त्यसो गर्दैनन् । सुनसरी र सप्तरी गरी दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सयौ अनुरोध गर्दा पनि उनीहरु मरिगए ढोका खोल्दैनन् ।
हरेक वर्षायाममा कोशीको ढोका खुलाउनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीले नै प्रयास गर्नुपर्ने तीतो बिडम्बना छ । आज पनि त्यही भयो ।
कोशीमा पानी उर्लिएपछि सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरीले गृहमन्त्रालयलाई लेखी पठाए र गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्काल थप ढोका खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । थप ढोका खोल्न पहल गर्ने भारतीय दूतको प्रतिबद्धता आएको भनिए पनि यो आलेख तयार गर्दासम्म थप ढोकाहरु खोलिएका छैनन् ।
कोशी नदीलाई भारतीयहरु ‘बिहारको आँसु’ उपनामले चिन्छन् । यसको अर्थ हो, कोशी ब्यारेजको ढोका धेरै खोले पानी भारततर्फ जान्छ र त्यसले बिहार तहसनहस बनाउने डर हुन्छ ।
आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने यही स्वार्थका कारण बरु नेपाली भूूभाग जति डूूबानमा परे पनि टुलुटुलुु हेर्दै बस्ने भारतीय कर्मचारी ब्यारेजको ढोका खोल्न कञ्जुस्याई गर्छन् ।
भारतीयहरु माथि पर्ने यही व्यवस्था र हाम्रो सरकारको बेवास्ताकै कारण केही वर्षअघि कोशीको तटबन्ध भत्किएर नेपाली बस्तीमा बितण्डा मच्चिएको थियो । हजारौं घरबारविहीन भएका थिए । कयौंले सो क्रममा ज्यान गुमाएका थिए ।
के हो कोशीब्यारेज ?
नेपाल र भारतका तत्कालीन राज्यप्रमुखहरु राजा महेन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कोशी ब्यारेजको सामूहिक उद्घाटन गरेका थिए । कोशी सम्झौता अनुसार कोशीब्यारेजको रेखदेख, नियन्त्रण, मर्मतसम्भार सहितका सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतको बिहार सरकार अन्तरगत रहेको छ ।